आफ्नै आङको डायनोसर ~ brazesh
आफ्नै आङको डायनोसर
December 22, 2013 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
एउटा उखान छ नि, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो ।
यसको सान्दर्भिकता जहिले जुन युगमा पनि त्यत्ति नै थियो र आज पनि छ । हामी मानिसहरुको एउटा अनौठो प्रवृत्ति हुन्छ, सकेसम्म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मात्रै खोज्ने । कुनै कुरा राम्रो भयो भने त्यसको जस पाएसम्म आफूले लिने । बिग्रेका भत्केका कुराहरुको दोष जाति चाहिँ सकेसम्म आर्काको थाप्लोमा हालिदिने । कस्तो हाइसञ्चो हैन त ? यो कुरा व्यक्तिगत सम्बन्धदेखि लिएर सिंगो मुलुकलाई नै असर गर्ने कुराहरुमा पनि त्यत्तिकै लागू हुने गर्छ । सामान्यतया परिवारमा पनि कुरा गर्दा हामीले हेक्का गरेका छौं, सन्तानले कुनै राम्रो काम गरेको बेला बाबुआमाले भन्ने गर्छन्, “देखिस्, मेरो छोरा (छोरी) को काम ?” अनि त्यही सन्तानले कुनै नराम्रो काम गरेको बेला त्यो भनाई परिवर्तन भएर “हेर तेरो छोरा (छोरी)को कर्तूत ।”
यो मानसिकता बडो अचम्मको हुन्छ । व्यक्तिगत सम्बन्धहरु बिग्रेका बेलामा आजसम्म तपाईंले कसैले मेरा यीयस्ता कमजोरीहरुका कारण यस्तो हुन गयो भनेर आत्मआलोचना गरेको विरलै मात्र देख्नुभएको होला । जहिले पनि बिगारका लागि अरुहरुका दोष मात्रै केलाउने गर्छन् मानिसहरु हैन र ? प्रेमीप्रेमिका, लोग्नेस्वास्नी, अभिभावक र सन्तान, दाजुभाई, दिदीबहिनी, देउरानी जेठानी, देवर भाउजु वा साथीसाथी जो सुकै हुन् । हरेकसंग बिग्रेका कुराहरुका कारण प्रशस्तै हुन्छन् र ती अधिकांश अरुकै हुन्छन् । हरेक मानिसलाई आफू महान लाग्छ, असल लाग्छ । आफूले प्राप्त गर्न नसकेका उपलव्धिहरुका लागि अरु कोही पाएन भने कर्म, भाग्य, दशा र भगवानलाई समेत दोष लगाएर पन्छिन्छ मानिस ।
उसलाई यो पनि थाहा छ, आफैले आफैलाई कहिले पनि ढाँट्न सकिन्न । तै पनि त्यो असम्भव कुरा गर्ने एकोहोरो लिंडेढिपी मानिसले छोड्दैन । ऊ अरुलाई छलेको भ्रममा आफैलाई छलेर बाँचिरहन्छ । त्यसैमा मानिस खुसी पनि रहन्छ, रमाउँछ पनि । तर जति रमाए पनि भ्रमले उसलाई अन्ततोगत्वा त हानि नै गरिरहेको हुन्छ । उसका उन्नति र प्रगतिका बाटाहरु बन्द गरिरहेको हुन्छ । जबसम्म मानिसले आफ्नो आङको भैंसी नदेखेर अरुहरुको आङका जुम्राहरु खोजिरहन्छ, ऊ कहिले पनि उँभो लाग्दैन । अझ आजकलका मानिसहरु त आफ्नो आङको डायनोसर नदेखेर अरुहरुका आङको व्याक्टेरिया देखिरहेको हुन्छ । अनि उसलाई लाग्छ आफ्नो दृष्टि कति तीक्ष्ण छ ।
हाम्रो जीवनका हरेक पक्षहरुमा, हरेक ठाउँमा यही मान्यताले काम गर्छ । कार्यालयमा पस्रा गर्न नसकिएका कामहरु, समयमा बनाउन नसकिएका निर्णयहरु, सही समयमा बनाउन नसकिएका नीति नियमहरु, बेलामा पूरा गर्न नसकिएका योजना र निर्माणहरु सबैका लागि सम्बन्धित मानिस कहिले पनि जिम्मेवारीवोध गर्दैन । सरकारमा बसेकाले प्रतिपक्षीका दोषहरु देख्छन्, प्रतिपक्षीहरु सरकारको नालायकी केलाउँछन् । पछिल्ला केही वर्षहरुलाई केलाएर हेर्नुस् त, यो प्रवृत्तिका बग्रेल्ती उदाहरणहरु सुरसाको मुख जसरी आँ... गरेर हाम्रो सामु पसारएिका छन् । सँिवधान किन बनेन ? राजनैतिक स्थिरता किन हुन सकेन ? निर्माणका कामहरु किन अलमलमा परे ? भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ? शान्तिसुरक्षा किन झन्झन् बिग्रेर गयो ? जो कसैलाई पनि यो प्रश्न गर्नुस्, उनीहरुसंग त्यसका लागि दोष लगाउनका लागि अरु मासनसहरु हुन्छन्, अरु कुराहरु हुन्छन् । तर जिम्मेवारीवहन भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन, कहिले पनि भएन । सानातिना देखि लिएर ठूला कुराहरुसम्ममा यही देखिन्छ ।
बाटोमा थुक्न हुन्न भन्ने कसलाई थाहा छैन ? घरको फोहोर सडकमा मिल्काउन हुन्न भन्ने कसले बुझेको छैन ? सवारीचाप भएको बेला गलत लेनबाट छिनै हुन्न, हर्न बजाउन हुन्न भन्ने कसलाई थाहा छैन ? बिसौनीमा बाहेक अन्त यात्रुवाहक गाडीहरु रोक्ने, चढाउने वा ओराल्ने गर्न हुन्न भन्ने कसले बुझेको छैन ? तर पनि विरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई समेत पेलेर वा रोकेर आफू अघि बढ्न थालेका छौं हाजकल हामी । हामीले यो क्रममा एउटा असाध्यै साधारण कुरा बिर्सिसेकेका छौं । एउटा एकदमै सजिलो कुरा गर्न छाडेका छौं । त्यो हो, आत्ममूल्याङ्कन ।
सोचेर हेर्नुस् त, आफूले आफैलाई नियाल्न जति सजिलो अरु केही छ त ? छैन, किनभने आफैले आफूलाई जति नजीकबाट अरु कसैलाई वा अरु कसैले चिन्न सक्दैन । मानिसले आफ्नो कमी कमजोरी केलाएन भने ऊ कहिले पनि परिष्कृत हुन सक्दैन । बामे सर्न सिकेपछि हिंड्न खोज्दा लड्ने बालकले आफू लड्नु अरुका कारणले हो भन्ने सोच्न थाल्यो भने ऊ कहिले पनि हिंड्न सक्दैन । जाँचमा फेल हुने बिद्यार्थीले त्यो गुरुको षडयन्त्र हो भन्ने ठान्यो भने यसले कहिले पनि विद्या आर्जन गर्न सक्दैन । कुनै टोलीले खेल हार्नुको कारण रेफ्रीको दोष हो भन्ने सोच्यो भने त्यसले कहिले पनि जित्न सक्दैन । चुनावमा हार्ने दलले त्यो हारको कारण देख्नै नचाहने हो र अरुका कारण मात्र आफू हारेको हो भन्ने ठान्यो भने त्यसले फेरि कहिले पनि जित्न सक्दैन । कमी नभएका मानिस, वर्ग, समुदाय, वाद, चिन्तन केही पनि हुँदैन । त्यसलाई ठम्याउनै सकिएन भने हटाउने कुरा नै आँउदैन ।
त्यसैले हामी सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र हामी आत्ममूल्याँकन गर्न सक्छौं, जिम्मेवारी वोध गर्न सक्छौं अनि भूलसुधार गर्न सक्छौं । तर हैन, हरेक हुन नसकेका कुराहरु अरुलाई मात्रै दोष थोपर्ने, वास्तविकताबाट सके जति पर मात्र भाग्ने प्रवृत्ति आफू भित्र पाल्यौं भने, त्यसले हामीलाई नै हानि गर्छ, अरुलाई हैन ।